Diyaarada Duqeyn ka Geystay Gobolja Gedo iuo Faafaahin kasoo baxeysa
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn diyaaradaha dagaalka Kenya ay ka gaysteen deegaanka Kalabayrka oo ku yaallo duleedka Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo Duqeyntaan ayaa waxa ay ka dambeysay, kadib markii dagaalyahano ka tirsan Shabaab ay soo galeen halkaasi shalay,...
Dagaal ka dhacay Qoryooley iyo Shabaab oo Sheegtay in ay qabsadeen
Dagaal u dhaxeeyay ciidamada Al Shabaab iyo kuwa dowladda ayaa ka dhacay duleedka Degmada Qoryooley ee Gobolka Shabellaha hoose, sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha ciidamada dowladda. Dagaalka oo Shabaab ay soo qaadeen, ayaa waxa ay ku weerareen tuulada Dal-biyaango oo ku dhaw...
Ilaa 90 qof Oo Tahriibayaal ah oo ku dhinteen Dooni Badda Liibiya
Ku dhowaad 90 ruux Tahriibayaal ah ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen Xeebaha Liibiya, kaddib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay Badda gelinkii hore ee jimcihii. Hey’adda IOM ayaa sheegeysa in illaa iyo hada 3 ruux laga soo badbaadiyay doonida ku degtay xeebaha ee ay la...
Gaari Shacab oo lagu Rasaaseeyay Gobolka Hiiran
Dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo lagu rasaaseeyay Gobolka Hiiraan, sida ay ku soo waramayaan dadka deegaanka. Gaarigaan ayaa waxaa rasaaseeyay Kooxo dabley ah, waxaana ku dhintay halkaasi hal ruux oo haweenay ah, sidoo kalena waxaa ku...
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Eng.Yarisow oo la kulmay Safiirka Uk
Gudoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa kulan la qaatay Safiirka Boqortooyada Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Mr David Concar. Guddoomiyuhu wuxuu qeexay arrimaha mudnaanta u leh maamulkiisa cusub. Dhankiisa,...
Howl Gal Saakay Ka socda Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo
Ciidamada maamulka Puntland ayaa lagu soo waramayaa in saakay oo Sabti ah hawlgallo amniga lagu xaqiijinaayo ka wadaan Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamadan ay mid mid u baarayaan guryaha ku yaalla halkaasi, iyaga oo howlgalka...
Ciidamo Maanta ku Dagaalamay Magaalada baydhabo ee Gobolka Baay
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay Ciidamo ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ku dagaalamay magaaladaasi. Ciidamadan ayaa dagaalkooda waxa uu ka dambeeyay kadib markii ay isku qabsadeen Doorashada Hoggaamiye...
Danab oo sheegtay in ay Dileen Saraakil Alshabaab ah
Saraakiisha Ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya oo ay wehliyaan Ciidamo Mareykan ah in galabta howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen degaanka Tooratoorow oo Al-shabaab ku lahayeen saldhigyo. Saraakiil ka tirsan ciidanka Danab ayaa warbaahinta...
Madaxweynihii Hore Xasan Sheekh oo Ka baaqday Socdaal uu Swedan Ku aadi rabay
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ah ayaa baajiyay socdaal uu ku tagi lahaa dalka Sweden, sababo la xiriira Visaha Dal ku galka ah oo la diiday in lagu shabadeeyo ama lagu dhejiyo Baasaboorkiisa Diblomaasiga. Wararka ayaa sheegaya Safaaradda Sweden ku...
Sanbaloolshe oo Ka hadlay Dhiibistii Qalbi Dhegax
Agaasimihii hore ee hay’adda nabad-sugidda Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ayaa ka gaabsaday in uu go’aan shaqsiyan ah ay ahayd ku wareejintii Cabdikariin Qalbidhagax ee ay dowladu u gacan gelisay dowlada Ethiopia. “Golaha Wasiirada ayaa kulan ay yeesheen ayaa...